अहिले संजालमा भाइरल तस्वीरःकुन ठाउँको नेताकार्यकर्ता हेर्नुहोस!!:: Mero Desh
अहिले संजालमा भाइरल तस्वीरःकुन ठाउँको नेताकार्यकर्ता हेर्नुहोस!!
Published on: ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०७:०७
‘झापा– अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तस्वीर भाइरल भइरहेको छ, जसमा एउटा अक्सिजन सिलिण्डर पाँच जनाले हस्तान्तरण गर्दै गरेको जस्तो देखिन्छ । एउटा सिलिण्डर दिएको तस्वीर खिचाएर थुप्रैले जस लिन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।
‘तर यो तस्वीर कहाँको हो भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन । समा यो तस्वीर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको हो । झापाको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, प्रदेशसभा सांसद् हिराकुमार थापा, पूर्व सांसद तारासम याङ्या, कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेल र उपमेयर मञ्जु प्रसाईंले सि’लिण्डर मा हात पुर्‍याएका छन् ।
‘शनिबारदेखि भाइरल यो तस्वीरमा भएको सिलिण्डर कनकाई नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड उपचार केन्द्रमा राख्नका लागि प्रदेश सरकारले पठाएको हो । र, त्यसैलाई केन्द्रमा राख्ने वेला जिसस प्रमुख पोर्तेल लगा यतले हातले छोएर तस्वीर खिचाएका हुन् ।
‘तस्वीर भाइरल भएपछि जिसस प्रमुख पोर्तेलले सामाजि क सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल मा हेर्दा लाग्छ शुभचिन्तक निकै कमाइएछ। सबै शुभचिन्त कहरुप्रति आभार, यहाँहरुको चिन्तालाई मनन् गरिनेछ ।’
यो पनि,,२–२ वर्षमा विश्वकप गर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले सन् २०२४ पछि आफ्नो कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । त्यसमा विश्वकप प्रत्येक २–२ वर्षमा गर्ने योजना रहेको छ । खेलाडीलाई बढी भार पर्ने र प्रतियोगिताको महत्त्व घट्ने डरबीच फिफाको यो प्रस्ताव अगाडि आएको हो ।
फिफाको ७१ औं कंग्रेसले पुरुष र महिला दुवैको विश्वकप २–२ वर्षमा गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले अगाडि ब”ढाउने निर्णय गरेको हो । फिफाले यसबारे कुनै निश्चित समयसी मा भने तोकेको छैन।तर विश्वकप फिफाका लागिआम्दानी को सबैभन्दा प्रमुख स्रोत हो ।
सन् १९३० देखि पुरुष र सन् १९९१ देखि महिलाको विश्वकप प्रत्येक ४–४ वर्षमा आयोजना हुँदै आएको छ । फिफाको फुटबल विकास प्रमुख आर्सन वेंगरले पछिल्लो मार्चमा विश्वकपसँगै युरोपेली च्याम्पियनसिप र अन्य प्रमुख ठूला प्रतियोगिता २–२ वर्षमा आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
युरोपेली लिगका आयोजकले यसअघि नै यसलाई अव्या वहारिक प्रस्ताव भनिसकेको छ । युरोपमा ३७ लिगको आयोजना हुने गर्छ । तर फिफाले वेंगरको प्रस्तावलाई गत साता प्रतिवेदनका रूपमा प्रकाशित गरेको थियो ।
फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले सन् २०२४ को विश्व फुटबल संरचनामा परिवर्तन गर्नेबारे आफू खुला मनस्थिति मा रहेको बताएका थिए । उनले वेंगरको प्रस्तावलाई निकै आकर्षक रहेको बताएका थिए ।प्रत्येक २–२ वर्षमा हुने विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारणकर्ताका लागि आकर्षक रहनेछ ।
तर संघ, लिग र क्लबले खेलाडीमाथि अझ चर्को भार पर्ने भनेर आलोचना गरेका छन् । म्यानचेस्टर सिटीका व्यवस्था पक पेप ग्वार्डि ओलाले यसैक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘फिफा र यूईएफएलाई हामीले अझ प्रत्येक वर्ष चार सय दिन हुनुपर्छ भनेर माग गर्नुपर्छ ।’
प्रत्येक दुई वर्षमा विश्वकप भयो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको अवधारणा समाप्त पार्नेछ ।यस्तै यसले छनोटका खेललाई बढाउने छ भने प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि बढी विश्राम पनि चाहिनेछ ।
यसले घरेलु लिगको लोकप्रियतामा पनि बाधा पुग्ने डर रहेको छ । सन् २०२४ पछि यूईएफएले च्या”म्पियन्स लिगको ढाँचा पनि परिवर्तन गर्दै छ ।त्यसअनुसार थप सय खेल बढी हुनेछन् । यसले क्लबमाथि आफ्ना खेलाडी चोटग्रस्त हुने डर बढी हुनेछ ।